सुन्तुष्टि विकासको बाधक हो । त्यसैले म सन्तुष्ट भएर बस्दिन, विकासका लागि छटपटी छ
Wednesday, 18 Jul, 2018 4:22 PM
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिका निकै चर्चामा रह्यो । कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त उमेद्वारका रूपमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पुत्री थिइन् भने एमालेका तर्फबाट देवी ज्ञवाली । एकातिर हेवीवेट नेताकी छोरी रेणु र अर्कोतिर सशक्त पार्टीका स्थानीयस्तरमा भिजेका लोकप्रिय देवीबीचको प्रतिश्पर्धा सबैभन्दा चर्चामा रह्यो । मतदान सकिएर मतगणना हुँदैगर्दा अन्तिमतिर माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र नै च्यातिदिएपछि चर्चा झन् चुलियो । लफडा पनि भयो । सर्वोच्चको आदेशपछि सोही ठाउँमा पुनः निर्वाचन भयो । पुनः निर्वाचनबाट रेणु बिजयी भइन् । हाल नेकपाका अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले धेरैपटक भन्ने गरेको शब्द ‘राजनीति संभावनाको खेल हो’ भन्ने उक्ति त्यहि भरतपुरमा देखिएको छ । कुनै समय ठुला दुश्मनजस्ता देखिने तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नयाँ पार्टी नेकपा बनिसकेको छ । संसदीय निर्वाचनमा उनै देवी ज्ञवालीको सहयोगमा प्रचण्डले चितवनबाटै निर्वाचन पनि जिते । अझ भनौ चितवनमा अहिले प्रचण्डका सबैभन्दा बढीसहयोगी बनेका छन् देवी ज्ञवाली । निर्वाचनमा देखिएको तिक्तता, मतपत्र च्यातिएर हराउँदाको पीडा, जसले हरायो उसैलाई जिताउँदाको अवस्था र हाल उनैसँगको सहकार्यबारे न्यूजसेवाले नेकपाका केन्द्रिय सदस्य देवी ज्ञवालीलाई कही प्रश्न गरेको छ :
स्थानीय चुनावमा मतपत्र च्यातिएकोदेखि धेरै कारणले र जुन पार्टीले हरायो, उही पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्डलाई संघीय चुनावमा साथ दिएका कुराले तपाई निकै चर्चामा रहनुभयो । जसले तपाईलाई हरायो भन्ने आरोप लाग्यो उसैलाई नै दिनरात नभनी सहयोग पनि गर्नुभयो । हिजोआज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले म एकिकृत पार्टीको केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारीमा छु । ७० बर्षको अवधिमा कम्युनिष्ट आपसमा विभाजित थिए । हामीले जेठ ३ गते कम्युनिष्ट पार्टीको एकिकरण गर्यौ । जेठ ३ गते नै मदन भण्डारीको स्वर्गवास भएको थियो । उहाँकै स्मृतिको दिनमा उहाँको सपना पुरा गर्न हामी जेठ ३ गते पार्टी एकता गरेका हौं । अब नेपालमा झण्डै दुई तिहाई जनमतको समर्थन रहेको सरकार हामीले पाएका छौं । यो नेपाली कम्यूनिष्ट वामपन्थीका लागि बहुत ठूलो उपलब्धीको कुरा हो र यो उपलब्धी जति हुन्छ त्यती ठूलो हुन्छ चुनौतीहरु र समस्याहरु त्यती नै आएका हुन्छन् । ती समस्याहरुको समधान गर्नका निमित्त हामीले अहिले योजनाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ । नेपाली जनताहरुले जुन अपेक्षा गरिरहेका छन् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणद्धारा नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रालाई अगाडी बढाउने काममा सरकारलाई अभिप्रेरित गरिरहेका छौँ ।
सरकार र सरकारी संयन्त्रबीच द्वन्द्व छ । यो एककिसिमको परम्परागत द्वन्द्व रहीआएको छ । यो संयन्त्र अर्धदक्ष छ । झारा टार्ने खालको छ । समयको माग र बेगको दायित्वलाई आत्मा साथ गर्न यो सयन्त्रलाई गाह्रो भइरहेको छ । त्यसले के हँुदो रहेछ भने शरिर एउटा ठाउँमा पुग्छ, लुगाको अवस्था अर्कोतिर हुँदो रहेछ । जब शरिर र लुगा बीचको तारतम्य मिल्दैन त्यहाँ निर असजिलोपनको महशुस हुन्छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा हामी जुन ढंगले अगाडी बढिरहेका छौ, त्यही खालको सम्यन्त्रको व्यवस्थापक्ीय पक्ष निर्माण गर्नका लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । आज नेपाली जनता राष्ट्रलाई सुदृढ बनाउने पक्षमा छन् । म अहिले भरतपुरमा छु । भरतपुरमा पार्टीको काममै केन्द्रित छु । यहाँ जनताको विविध खालका समस्याहरू छन् । उद्योगकर्मीहरुका आफ्नै समस्या छन्, मजदुरहरूका आफ्नै समस्या छन्, विद्यार्थीहरूका समस्या छन्, आम मानिसहरूका व्यक्तिगत समस्या छन् । साना भन्दा साना समस्याहरु छन् अब यहाँ सिष्टमबाट प्रक्रियाहरू अघि बढ्दा हामीलाई धेरै गाह्रो हुदैन । तर पुसिङ गर्नु पर्ने, कुनै सहि कामलाई पनि धकेल्नु पर्ने, बल गर्नु पर्ने त्यसलाई एउटा किनारामा पुराउन चाँहि अगाडी बढ्नु पर्ने जुन खालको हाम्रो सयन्त्र छ, प्रक्रिया छ, परम्परा छ यसले गर्दा हामी जस्ता कार्यकर्ताहरूको दिनचर्यालाई अलि बढी व्यस्त बनाउने र अलि बढी दौढधुपको सृजना गर्ने खालको स्थिति छ । यो स्थितिलाई हामी अन्त गर्न चाहन्छौ । हामी चाहन्छौ प्रसाशन बिधिद्वारा तोकिएको समयकमा तोकिएको ठाउँमा तोकिएको बिधिमा, तोकिएको प्रक्रियामा तोकिएको मापदण्ड भित्र त्यो कामहरु सम्पादन होस । तर अहिले यी कुराहरु मिल्न सकिराको छैन । त्यसैले हामी जस्ता कार्यकर्ताहरुको दौडधुप र क्रियाशिलता अलि बढी छ । त्यही भएर अहिले पार्टीको काममा व्यस्त छु ।
स्थानीय तहको चुनावमा तपाईको पराजय भयो । त्यतिबेला जे जस्ता अवस्था रहेपनि अहिले पार्टी एकता भइरहेको छ । एकतापछि अहिले एकैठाउँमा रहनुपर्ने अवस्था छ । अहिले तपाईको सम्बन्ध रेणु दाहाल र प्रचण्डसँग कस्तो छ, कसरी सहकार्य गरिरहनुभएको छ ?
अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा के भयो यो कुरा दुनियाँलाई थाहा छ । अब त्यतापट्टी नजाऔं । त्यस्तो स्थितिमा साँच्चिकै भन्दा उहाँहरुले मलाई ढुङ्गाले हान्नु भयो । मैले उहाँहरुलाई फुलको मालाले स्वागत गरँे, यतिमात्र बुझ्नस् । निर्वाचनमा विधिध खालको प्रयोग गरेर मलाई हराइयो । तर परिस्थितीले मलाई अर्को जिम्मेवारी दियो । जुन विभिजित कम्यूष्ट पार्टीलाई एक जुट गर्न । एकजुट गर्नको एउटा बाटो पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई नजिताउँदा, उहाँ हार्दा यो एकता हुने थिएन । जसले मलाई विविध ढंगले हरायो त्यो मान्छेलाई फेरि आन्दोलनको एकताको निम्ती जिताउनु पर्यो । बाध्यताले जिताउनु पर्यो । म नभएको भए उहाँ जित्ने अवस्था थिएन । म नलागेको भए उहाँलाई जित्न धेरै गाह्रो थियो । त्यो स्थितिमा कसले मलाई के गर्यो त्यो प्रश्नमा नजाउँ । ईतिहासको दायित्व कसले निभाउनु पर्छ, त्यो मेरोसामु सबभन्दा गम्भिर प्रश्न थियो । उदाहरणका लागि नेलसन मण्डेलालाई गोरा शाहीले २७ बर्ष जेल हाले । तर परिवर्तनपछि नेलसन मण्डेलाले नै उसैलाई उपराष्ट्रपति बनाए । जसले उहाँलाई जेल हाल्यो, यदि प्रतिसोधको, घृणाको, बदलाको, भावना हरेको भए उनी उपराष्टपति हुदैनथे । यदि त्यस्तै गरि नेपालको सन्दर्भमा मैले स्थानिय चुनावको कुरालाई लिएर बदला, घृणा र तिरस्कार व्यक्त गरिरहेको भए यो परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी एकताको बिन्दुमा प्रचण्डलाई ल्याउन, उनलाई संसदमा पुर्याउन र उनलाई जिताई पार्टी एकता गराई छाड्ने अवस्थाको सिर्जना हुने थिएन । मलाई ईतिहासको दायित्व निर्वाह गर्नु थियो । ईतिहाँसको दायित्व मेरो काँधमा आएको थियो । कि कम्यूिष्ट पार्टी विभाजित थियो ।े जनमत ६४÷६५ प्रतिशत जनमत वामपन्थीको छ तर अल्पमत वालाले शासन गरेर बसिरहेको अवस्था थियो । हो त्यो जनमतलाई एकिकृत गर्ने काममा प्रचण्ड पनि एउटा फ्याक्टर थिए । ति कुराहरुलाई मैले महशुस गरेर नै हिजो सबै तिता कुराहरुलाई बिर्सिएँ । अहिले उहाँ दुई अध्यक्ष मध्ये एक हुनु हुन्छ । एउटा अध्यक्षसंग एउटा कार्यकर्ताको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त्यो सम्बन्ध मेरो छ ।
अहिले प्रचण्ड तपाईकै क्षेत्रबाट सांसद हुनुहुन्छ, रेणुजी मेयर हुनुहुन्छ । पार्टी एउटै भएको मात्र कुरा नभइ साना साना विकासका काममा पनि तपाईहरुको सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन ?
प्रचण्ड ज्यूसंग मैले निरन्तर भेटघाट गरिरहेको छु । कामको बारेमा, योजनाको बारेमा छलफल हुन्छ । पार्टीलाई कसरी एकिकृत गर्ने भन्ने कुरामा पनि छलफल हुन्छ । यस हिसाबले अब चितवनको सबृद्धि प्रचण्डसँग जोडिएको छ, हामीसँग जोडिएको छ । सिंगो पार्टीसँग जोडिएको छ । हाम्रो भावना मिलिसकेको छ । अब म र प्रचण्ड ज्यूसँगै छौ र अब हामी नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरुको प्रगतिशील पार्टीहरुको कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट नेपाल राष्ट्रको सम्बृद्धि स्वतस्त्रता र स्वधिन्ताको रक्षा र बिकास स्तरोन्नतीको काममा लागेका छौ । उहाँ एउटा ठाउँमा हुनुहुन्छ म अर्को ठाउँमा छु तर हाम्रो काम एउटै छ
रेणुसँगको व्यक्तिगत सहकार्य कस्तो छ अहिले ?
उहाँ भरतपुरको मेयर हुनुहुन्छ । भरतपुरको बिकास निर्माणले मेयरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मेयरको योजना, मेयरको भिजन, मेयरको दृष्टिकोण, मेयरको खटाई, मेयरको सक्रियताका कुराले धेरै कुरालाई के मन पर्छ त्यसैले अब उहाँलाई हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय सदस्य र म पनि केन्द्रिय सदस्य । एउटा पार्टीको केन्द्रिय सदस्यले त्यही पार्टीको केन्द्रिय सदस्यलाई कसरी सघाउनु पर्छ, त्यसरी नै सघाई रहेको छु । व्यक्तिगत कुरा गर्दा हामी हिजो पनि व्यक्तिगत थिएनौ । उहाँ अर्कै पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनु भएको थियो र म अर्कै पार्टीबाट । हाम्रा असम्झदारी थिए भने पार्टीगत रुपकै असम्झदारी थिए । व्यक्तिगत रुपमा उहाँसँग मेरको कुनै द्वन्द्व थिएन । उहाँहरुको पनि सायद थिएन । अब अहिले हामी एउटै पार्टीका नेता भइसकेका छौँ । हामी मिलेर जनताको बीचमा काम गर्नुबाहेक अरू बिकल्प छैन । हामी योजनाको बारेमा बसेर छलफल गर्छौ । हामीले जुन भरतपुरको सपना देख्या छौ चितवनको जुन सपना देख्या छौ त्यो सपनालाई पुरा गर्ने दायित्व मेयरको हिसाबले उहाँसँग बढी केन्द्रित छ । पार्टीको केन्द्रिय नेताको हैसियतले बेला बेलामा सघाउने गर्छु
त्यो कुर्सीमा म भईदिएको भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने मनमा लाग्छ कि लाग्दैन ?
त्यो पास्ट थियो अब सकियो । एउटै पार्टीमा एउटै समयमा एउटा भन्दा त बढी मान्छे त्यो कुर्सीमा बस्न सक्दैन । सक्छ र ? एउटा पार्टीमा एउटै समयमा एउटा मान्छे त बस्न सक्दैन नि हो त्यो स्थितिलाई सहज ढंगले बुझ्नु पर्यो । आत्मासात गर्नुपर्यो । बाहिर बसेर ती योजनाहरुलाई सघाउनु पर्यो । चितवनका जनतालाई कमिटमेन्ट गरेका छांै कि हामी आउँदो निश्चित समयभित्र हरेक घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने छौं । हामी हरेक जनताको घरदैलोमा यातायात पुग्ने कुराको कमिटमेन्ट गरेका छौं । हामीले चितवनको जनताको जीवनस्तर अघिलोभन्दा धेरै राम्रो बनाउने कमिटमेन्ट गरेको छौ । भौतिक पूर्वाधारको पक्षमा, चाहे सिटीरोड होस् या रिङरोड, चाहे लिङ्करोड होस् या चाहे पत्रकारको बिषयमा होस् धेरै योजनाहरुसोचेका छाँै । ती योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न अब मेयरलाई घचघचाउने, उठउठ बनाउने, ती कामहरुको अनुगमन गर्न लगाउनेजस्ता सहयोग गरेको छु ।
अहिलेसम्म मेयरले गरेको काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तृष्टी मानव जातीको बिकासको बाधक हो । म सन्तृष्ट छैन । मानव जाति सन्तुष्ट भएको भए बाँदरबाट यो स्थितिमा आउने थिएन । त्यसैले म बिकासका कामका हिसाबले सन्तृष्ट छैन । सन्तृष्टीले हामीलाई प्रगती गर्न दिदैन । हामीलाई छटपटी छ । हामी ढिलो भएको अनुभुती छ । हामीले धेरै गर्न बाँकी छ । त्यसैले ढिला भएको महशुस भएको छ । त्यसैले मैले सन्तुष्ट मान्नु हुँदैन । जतिसकयो छिटो एउटा काम सकाएर अर्को काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यति दायत्वभित्र कसरी हामी सन्तृष्ट भएर बस्न सक्छौ ? त्यसैले असन्तृष्टीले हामीलाई उर्जा दिन्छ । हामीलाई क्रियाशिलता दिन्छ । हामीलाई काममा अगाडी बढाउँछ र नयाँ रिजल्टमा पुर्याउने हुनाले सन्तृष्टी र आत्मरतीमा बस्नमा अहिले हामीलाई समय छैन ।
त्यति तितो सम्बन्ध भएको अवस्थामा तपाईलाई पहिलोपटक बालकोटमा प्रचण्ड र केपी ओलीलाई भेट्दा कस्तो महशुस भएको थियो ?
जतिखेर दुबै पार्टीले एकता गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो । त्यतिखेर मलाई बोलाइएको थियो । त्यो घोषणापछि प्रचण्डज्यू एउटा दलको नेता उहाँ संसदमा आउन जरुरी थियो । उहाँ यसभन्दा अगाडी कहिले रोल्पा, सिराहा त कहिले कताबाट चुनाव लडिराख्नु भएको थियो । उहाँको मनमा चितवनबाट चुनाव लड्ने इच्छा थियो, तर स्थानीय चुनावको घटनाले कतै देवी ज्ञवाली बाधक पो बन्छ कि भन्ने उहाँहरुको मनमा थियो । यदि त्यस्तो भयो भने सेफ ठाउँमा जानु पर्छ कि भन्नेसम्म सोच्नुभएको थियो । यसबारे प्रचण्ड र ओलीबीच कुरा भएपछि मलाई बोलाइएको थियो । मैले दुबै नेतालाई त्यहाँ देखेपछि अब हुने कुराको अर्थ त बुझे । कमन सेन्सले यो कुरा बुझिहाल्छ । त्यसपछि ओली ज्यूले मलाई चिनाउन खोज्नु भयो तर प्रचण्ड ज्यूले भन्नु भयो म चिन्छु जान्छु विगतमा दुर्घटना भयो यस्तो नहुनुपर्ने भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले भने– यो कुरा नदोहोर्याउनुस्, स्टप ईट । यो कुराको जरुरी छैन अब के गर्नु पर्छ त्यो भन्नु । पहिले यहाँहरुको भेटको अर्थ भन्नुहोस्, के काम छ म पनि बुझ्न सक्छु । तपाईंहरु दुई जना नेताहरु म यहाँ आईसकेको सन्दर्भमा तपाईहरुले के भन्न खोज्नु भएको छ म पनि बुझ्छु ।
प्रचण्डको मनमा डर रहेछ यसले मलाई हरादिन्छ मेरो छोरीको घटना बदलाको म माथि पोख्छ । ओलीलाई पनि यस्तै लागेको रहेछ । म एउटा बिशेष घातुबाट बनेको मान्छे मैले कम्यूष्ट पार्टी निर्माणका निम्ती मैले घर छाडे, परिवार छाडे, मेरो व्यक्ति गत जीवनको धेरै औसरहरु घुमाए व्यक्तिगतरुपमा पीडा, हाँसो, कष्ट दुख आफ्नो ठाउँमा होला तर राष्ट्रिय एकताका निम्ती यी कुनै पनि कुरा महत्वपूर्ण छैन । देशका हितका निम्ती कुरा कहिल्यै पनि प्रमुख बन्न सक्दैन । राष्ट्रिय आवश्यकताका निम्ती मेरो पोजिशन कहाँ के भयो भन्ने कुरा कहिले पनि प्रमुख हुन सक्दैन । हो यही भावनाले मलाई उत्प्रेरित गर्या थियो ।
चुनावमा भएको क्षतीपुर्ती दिने कुरा भयो कि भएन ?
मैले त्यस्तो केही मागिन, म चाहदैन थिएँ । उहाँहरुले नै त्यस्तो प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँहरुले थप बस्नका लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर म बसिन । मैले भने तपाईहरु चितवनबाट चुनाव लड्दा मबाट चुनाव हराउन कुनै खेल हुन्छ भनेर कल्पना नगर्नुहोस्, म तपाईंलाई १० हजारभन्दा बढी मतले जिताउँछु, त्यतिखेरै भनेको थिएँ । त्यसपछि त्यो उहाँहरुको र मेरो साईडबाट गर्ने कर्तव्य थियो । अब उहाँलाई के गर्नु पथ्र्यो त्यो कुरा उहाँहरुलाई थाहा थियो । तर, म सर्त राखेर राजनितिमा लागेको मान्छे होइन कुनै चीज प्राप्ति गर्न सर्त गर्ने, अप्ठ्यारो पार्ने, घाँटी रेट्ने म गर्दिनँ ।
पार्टीमा मलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको भए राम्रो हुन्थ्योजस्तो कुरा मनमा आयो ?
होईन म पार्टीको कार्यकर्ता हो । मेरो काम जनताको सेवा गर्ने हो । म पदमा रहे पनि जनताको काम गर्ने हो पदबाट बाहिर रहेपनि जनताको काम गर्ने हो । हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा जदको निम्ती जिम्मेवारी लिने धेरै छन् । कर्तव्यको निम्ती समर्पित मान्छेको खाँचो छ । मलाई के दिन्छ ? मैले पार्टीमा मन्त्री हुन्छु भनेर लागेको होईन म संसद हुन्छु भनेर कल्पना पनि गरेर लागेका होईन म त नेपाललाई सुन्दर, सम्बृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली र विकसित नेपालको सपना देख्याछु । म पदमा रहेपनि गर्छु, नरहे पनि यो गर्छु । अब मलाई कहाँ राख्ने, कहाँ म्यानेज गर्ने भन्ने त पार्टीमा ड्राभिङको जिम्मेवारी लिने व्यक्रिले सोच्ने कुरा हो ।
भविष्यमा तपाईको मुल्यांकन गर्छौ त भन्नुभयो होला ?
उहाँहरुको नजरमा देवी ज्ञवाली निष्ठाको कार्यकर्ता हो । यो लोभलालचमा प्रभावित हुने कार्यकर्ता होइन भन्ने लागेको छ । पदका लागि मरिहत्य गर्ने मान्छेहरु छन् र म आफूलाई फरक कार्यकर्ता ठान्छु । हामी मन्त्री हौंला, संसद हौंला तर देश ठिक ठाउँमा गएन भने हामी मन्त्री भएको के अर्थ ? हामी संसद भएको के अर्थ ? यदि राष्ट्रलाई ठिक दिशा दिन सकेनौ भने हामी प्रधानमन्त्री भएपनि कुनै अर्थ छैन ।
सरकार गठन भएको चार महिना भयो तर केही उपलब्धी भएको छैनजस्तो जनतालाई अनुभुती हुँदैछ, तपाई यो बिषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
चार महिना अघि र चार पनिहना पछिका दृश्यहरु तुलना गर्नुहोस् । यो देशमा तस्करहरुको राज थियो, त्यसको नतिजा सुन तस्करमै देखियो । देशका ठूलो प्रशासकहरु त्यसमा संलग्न रहेछन् । सुन त तोलमा तस्कर भएको रहेनछ, किलोमा पनि होईन, यहाँ त क्विटलमा तस्करी हुँदैरहेछ । त्यसलाई पक्रिने जेल हाल्ने काम कसले गर्यो ? सरकार त हिजो पनि थियो, थिएन ? तर यो सरकारले गर्यो । मान्छेहरुका अगाडी म सोध्न चाहन्छु, नेपालको तस्करी बन्द गर्ने गरी कसले काम सुरु गर्यो त ? वर्तमान सरकारले गरेको छ । काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई ब्ल्याक लिस्टेड गरेर समय नै तोकेर काम गर्न भनेको छ । यातायात सिण्डिकेट कसले तोड्यो । यही सरकारले गरेको होइन ? भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो थियो, कति तिक्ततापूर्ण थियो, त्यो तिक्तता कसले फेर्यो ?